SPC Smart Ultimate, safidy tena ara-toekarena | Vaovao Gadget
Miguel Hernandez | 28/03/2022 10:00 | General, Finday, hevitra, telephony
Miverina miaraka izahay SPC, orinasa izay niaraka taminay miaraka amin'ny famakafakana maro tato anatin'ny taona vitsivitsy, na dia tamin'ity indray mitoraka ity dia manana fahafahana hahita fitaovana izay angamba tsy ny marika mahery vaika tsipika ny raharaham-barotra, fa tsy maharary ny mahatsiaro, dia miresaka momba ny finday avo lenta.
Manadihady ny SPC Smart Ultimate vaovao izahay, safidy ara-toekarena miaraka amin'ny zava-drehetra ilainao amin'ny fiainana andavan'andro ary fahaleovan-tena lehibe ho an'ireo izay miahy ny vidiny.. Fantaro miaraka aminay ny toetran'ity terminal SPC vaovao ity ary raha tena mametraka ny tenany ho solon'izay mifanaraka amin'ny vidiny.
1 Design: Vidiny sy faharetana isaky ny saina
3 Traikefa amin'ny fahitalavitra sy fahaleovan-tena
Design: Vidiny sy faharetana isaky ny saina
Voalohany indrindra, mahita vatana plastika isika, zavatra mitranga koa any aoriana, izay misy fonony vita amin'ny tora-pasika avo roa heny izay ahafahantsika manome fehezam-boninkazo bebe kokoa sy endrika ivelany, maninona raha lazaina izany, zavatra mahafinaritra kokoa. Fvita amin'ny plastika mainty madio ao ambadika, Ny laza rehetra dia mijanona ho an'ny sensor sy ny tselatra LED.
fandrefesana: 158,4 × × 74,6 10,15
lanja: Gramin'ny 195
Ny tapany ambony ho an'ny jack 3,5mm dia mbola misy, fa ny ampahany ambany kosa dia manana seranan-tsambo USB-C izay hitondranay ny fiampangana. Bokotra indroa eo amin'ny mombamomba ankavia ho an'ny feo sy bokotra "hery" eo amin'ny ilany havanana izay, raha ny hevitro, dia mety nahatonga azy ho lehibe kokoa. Ny telefaona dia manana fandrefesana lehibe sy lanja miaraka aminy, saingy mahatsapa tsara ny fananganana azy ary toa manana haavon'ny fanoherana tsara amin'ny fotoana sy ny fiantraikany.
Ho an'ity farany dia manana izahay fonosana silicone mangarahara tafiditra ao anaty fonosana, miaraka amin'ny tariby fiampangana, ny adaptatera herinaratra ary mazava ho azy ny sarimihetsika fiarovana ho an'ny efijery izay napetraka. Famolavolana mamela handeha, miaraka amin'ny frame voatonona eo amin'ny faritra anoloana ary koa fakantsary "karazana mitete".
Ity SPC Smart Ultimate ity dia miaraka amin'ny processeur Quad Core Unisoc T310 2GHz, zavatra tsy mitovy amin'ny fahitantsika amin'ny Qualcomm Snapdragon malaza ary mazava ho azy MediaTek. Inona koa, Izy io dia miaraka amin'ny 3GB an'ny LPDDR3 RAM. fa tamin'ny fitsapana nataontsika dia nifindra tsara izy io miaraka amin'ireo fampiharana mahazatra indrindra sy RRSS, na dia mazava ho azy fa tsy afaka mangataka ezaka izay, noho ny fahaiza-manao, dia tsy ho vitany.
Manana a IMG PowerVR GE8300 GPU ampy hampandehanana ny sarin'ireo rindranasa voalaza etsy ambony ary koa ny mpampiasa interface tsara, lavitry ny fanolorana fampisehoana azo ekena amin'ny lalao video be entana toy ny CoD Mobile na Asphalt 9. Raha ny fitahirizana dia manana fahatsiarovana anatiny 32GB isika.
Manana USB-C OTG izy io
Ireo fitaovana rehetra ireo dia miasa miaraka amin'ny Android 11 amin'ny dikan-teny tena madio, zavatra ankasitrahana, miala amin'ny marika hafa toa an'i Realme izay mameno ny efijery amin'ny adware, zavatra izay toa anao izay nanaraka ahy hatry ny ela. izaho ho fahadisoana tsy azo avela.
Midika izany fa enyNy fampiharana Google ofisialy ihany no ho hitanay hampandehanana tsara ny Rafitra fandidiana, ary ny fampiharana ofisialin'ny SPC.
Eo amin'ny ambaratongan'ny fifandraisana hananantsika tambajotra 4G rehetra mahazatra any amin'ny faritany Eoropeana: (B1, B3, B7, B20), ary koa ny 3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) ary mazava ho azy GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Manana GPS sy A-GPS koa izahay Wifi 802.11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz sy 5GHz miaraka amin'ny fifandraisana Bluetooth 5.0.
Misarika ny sainay fa hanohy ny safidy ankafizo ny radio FM, zavatra izay tsy isalasalana fa hahafaly ny sehatra sasany amin'ny mpampiasa. Amin'ny lafiny iray, ny lovia removable dia hamela antsika hampiditra karatra NanoSIM roa na manitatra ny fahatsiarovana hatramin'ny 256GB bebe kokoa.
Traikefa amin'ny fahitalavitra sy fahaleovan-tena
Manana efijery izahay 6,1 santimetatra, tontonana IPS LCD izay manana famirapiratana ampy, na dia mety tsy hamirapiratra amin'ny toe-javatra ivelan'ny trano miaraka amin'ny hazavana voajanahary be loatra. Izy io koa dia manana aspect tahan'ny 19,5: 9 sy 16,7 tapitrisa loko, rehetra mba hanolotra HD + fanapahan-kevitra, izany hoe, 1560 × 720, manome ny mpampiasa ny hakitroky ny 282 pixel isaky ny santimetatra.
Ny efijery dia manana fanitsiana loko ampy sy tontonana izay mazava ho azy fa mora. Ny feo, avy amin'ny mpandahateny tokana, dia matanjaka fa tsy manana toetra (noho ny antony mazava).
Raha resaka fizakan-tena dia manana a Bateria 3.000 mAh, na dia noho ny hatevin'ny fitaovana dia ho nieritreritra izahay fa mety ho bebe kokoa. Tsy manana fampahalalana momba ny hafainganam-pandehan'ny fiampangana izahay, raha ampianay fa tsy tafiditra ao anaty boaty izany (na eo aza ny habeny) tsy misy adaptatera herinaratra, satria manana tafiotra tonga lafatra isika.
Na izany aza, lNy 3.000 mAh dia manome vokatra tsara mandritra ny iray andro sy tapany na roa andro amin'ny fiheverana ny fahaiza-manao ara-teknika amin'ny fitaovana ary ny Operating System dia tena madio, ka tsy hanana dingana tsy mitombina isika any aoriana.
Manana fakantsary aoriana 13MP afaka mirakitra amin'ny fanapahan-kevitra FullHD (eo ambonin'ny efijery), tsy misy Night Mode na fahaiza-manao miadana. Ho an'ny ampahany, ny fakantsary eo anoloana dia manana 8MP ho an'ny selfies mihoatra ny ampy. Mazava ho azy, ny fakan-tsary an'ity SPC Smart Ultimate ity dia mifanaraka amin'ny vidiny mora ary ny fikasany dia tsy iza fa ny hizara votoaty sasany amin'ny tambajotra sosialy sy hanala antsika amin'ny fahasahiranana.
Ity SPC Smart Ultimate ity 119 euros monja ny vidiny, ary tsy fantatro raha tokony hanana zavatra hafa ao an-tsainao ianao. Kely no takiana amin'ny terminal iray izay tsy dia lafo loatra. Manana mpamonjy aina isika, telefaona ahafahantsika manao antso amin'ny toe-javatra tsara, mampiasa votoaty multimedia amin'ny sehatra lehibe tsy misy karazana stridency ary mifandray amin'ireo olon-tiantsika amin'ny alàlan'ny fampiharana malaza indrindra, tsy misy hafa.
Manolotra fitaovana amin'ny haavon'ny vidiny izy io, mifanandrify mivantana amin'ny Redmi an'i Xiaomi, saingy manome antsika traikefa madio tanteraka, tsy misy mpanelanelana, dokam-barotra na fampiharana tsy ilaina. Na mila telefaona ho an'ny kely ianao, na ho an'ny antitra na fitaovana mamonjy aina faharoa fotsiny, ity SPC Smart Ultimate ity dia manome anao ny vola aloanao.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 28 tamin'ny 2022
OS madio tanteraka
Ary ny charger?
ny panel dia HD
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » SPC Smart Ultimate, safidy tena ara-toekarena